ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို ဒီနေ့ အမိန့်ချမယ်၊ ကလိုရင်းပါတဲ့ဆေးတွေ လူ့ကိုယ်ပေါ် တိုက်ရိုက်ဖြန်းတာ လုံးဝမလုပ်ဖို့ ထုတ်ပြန်၊ မန္တလေးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲခန်း ပြင်ဆင်းပြီးစီး
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို ဒီနေ့ အမိန့်ချမယ်၊ ကလိုရင်းပါ...
22 พ.ค. 2563 - 09:30 น.
(၁) ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို ဒီနေ့ အမိန့်ချမယ်
အဂတိလိုက်စားမှု လေးမှုနဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော်ကို ဒီကနေ့ မေ ၂၂ ရက်မှာ အပြီးသတ်အမိန့်ချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဂတိလိုက်စားမှု လေးမှုနဲ့ ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်မှာ စွဲချက်တင်ခဲ့တာပါ။
စွဲချက်တင်ပြီး လေးလအကြာမှာ သူ့မှာ အပြစ်ရှိမရှိကို ခုမနက် ဆယ်နာရီ တရားခွင်မှာ အပြီးသတ် အမိန့်ချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးကိုသာ မေးဖို့နဲ့ အခုအမိန့်ချမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ဘက်က ပြောစရာမရှိကြောင်း သူ့ဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးနိုင်လင်းထွန်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
ထားဝယ်လေယာဉ်ကွင်းမှာ ခြုံနွယ်ရှင်းလင်းတဲ့ကိစ္စ၊ ထားဝယ်မှာ GGS ကုမ္ပဏီကို လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဖြူးခွင့်ပေးရာမှာ အဂတိလိုက်စားမှုတွေရှိခဲ့တာ၊ သူပိုင်နေအိမ်ကို အဲဒီကုမ္ပဏီကို ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်နဲ့ ဝယ်စေပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ချပေးခဲ့တာနဲ့ သူပိုင်နေအိမ်ခြံစည်းရိုးကာရံရာမှာ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာသုံးစွဲခဲ့တာ စတဲ့ အမှုလေးမှုနဲ့ ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လမှာ တရားစွဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထားဝယ်လေယာဉ်ကွင်းခြုံရှင်းတဲ့ကိစ္စမှာ လေဆိပ်အဆောက်အအုံပြန်ပြင်ဖို့၊ ခြုံရှင်းဖို့နဲ့ ခြံစည်းရိုးခတ်ဖို့ လုပ်ငန်းသုံးရပ်အတွက် တိုင်းအစိုးရက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြေပြင်မှာတော့ ခြုံရှင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဟာ ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်ခြံစည်းရိုးကာရံရာမှာ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာတွေ သုံးစွဲခဲ့ပြီး အဂတိကော်မရှင်က စုံစမ်းစစ်ဆေးတော့မှ ခြံစည်းရိုးကာရံတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေးချေခဲ့တာတွေ့ရတယ်လို့ တရားခွင်မှာ စစ်ဆေးချက်ရှိထားပါတယ်။
နောက်တစ်မှု ထားဝယ်ကို လျှပ်စစ်မီး ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ အဲဒီ GGS ကုမ္ပဏီက ပေးရမယ့်ဓာတ်ငွေ့ဖိုး ကြွေးကျန်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ထားဝယ်မှာ လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဖို့ တိုင်းအစိုးရနဲ့ ဒီကုမ္ပဏီတို့ ၂၀၁၆ မှာ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး အဲဒီစာချုပ်မှာ ကွက်လပ်ဖြစ်နေတဲ့ အချက်တွေ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ထားဝယ်ကို ဒီကုမ္ပဏီက လျှပ်စစ်မီးပေးဖို့ ခွင့်ပြုချက်ဟာ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ဆုံးဖြတ်ထားတာမရှိဘဲ စာချုပ်အရင်ကြိုချုပ်ထားတာတွေကို တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားပါတယ်။
အဂတိ မှု နဲ့ ဖမ်းဆီး ခံရတဲ့ တနင်္သာရီ ဝန်ကြီးချုပ်
တနင်္သာရီ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို အဂတိပုဒ်မနဲ့ စွဲချက်တင်
တနင်္သာရီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တိုင်းအစိုးရဝန်ကြီး ဦးမြင့်မောင်ကို ခန့်
အထက်ပါအမှုလေးမှုလုံးအတွက် ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို အဂလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၅ နဲ့ စွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ မတ်လက သမ္မတ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်နဲ့အတူ Global Grand Services(GGS) ကုမဏီမန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဦးသိန်းထွေး၊ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မြတ်နဲ့ ဦးသူရအုံ တို့ကို အဂတိလိုက်စားဖြစ်အောင် အားပေးအားမြှောက်ပြုမှု ပုဒ်မ ၅၆/၆၃ တို့နဲ့ အသီးသီးစွဲချက်တင်ထားပါတယ်။
အမှုကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်မှာ ရုံးချိန်းပေါင်း ၆၀ ကျော်နဲ့ တစ်နှစ်ကျော်အကြာ စစ်ဆေးအပြီးမှာ အခုလို အပြီးသတ်အမိန့် ချမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ဟာ တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် သုံးနှစ်ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီက သရက်ချောင်းမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကနေမှ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
(၂)ကလိုရင်းပါတဲ့ဆေးတွေ လူ့ကိုယ်ပေါ် တိုက်ရိုက်ဖြန်းတာ လုံးဝမလုပ်ဖို့ အစိုးရ ထုတ်ပြန်
ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်နေချိန်မှာ ရောဂါပိုးတွေ ကပ်ငြိမပါလာစေဖို့ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို ကလိုရင်း ဒါမှမဟုတ် ကလိုရင်းပါတဲ့ဆေးတွေကို တိုက်ရိုက်ဖြန်းနေတာဟာ မှန်ကန်တဲ့ပိုးသတ်သန့်စင်တဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးပါတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို ကလိုရင်းပါဝင်တဲ့ဆေးရည်တွေ တိုက်ရိုက်ဖြန်းတာမျိုး လုံးဝမပြုလုပ်ဖို့လည်း ဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးပါတယ်။
အလုံပိတ်အခန်းငယ်တွေထဲမှာ ကလိုရင်း ဒါမှမဟုတ် ကလိုရင်း ကွန်ပေါင်းပါတဲ့ ဓာတုဆေးအပျော့စားတွေကို လူကိုယ်ပေါ်ဖြန်းတဲ့နည်းနဲ့ ပိုးသန့်စင်ပေးလို့မရတာကိုလည်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအတိအလင်း ကြေညာထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အဲဒီပိုးသတ်စင်ဆေးရည်ကြောင့် အရေပြား၊ မျက်စိ တို့ကို ထိခိုက်စေပြီး ပါးစပ်ထဲဝင်ရင် Mucous Membrane တွေ ထိခိုက်ပျက်စီးတာ၊ အငွေ့ကိုရှူမိရင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ထိခိုက်ပျက်စီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ WHO က သတိပေးထားတာပါ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ပိုးသတ်ချင်ရင် အဝတ်အစားတွေကို မိနစ်သုံးဆယ်ကြာ ဆပ်ပြာနဲ့ရေစိမ်လျှော်ဖွပ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး လူကတော့ ဆပ်ပြာနဲ့ ရေချိုးသန့်စင်တာက ဘေးအကင်းဆုံးနဲ့အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရက်ပြန် ဒါမှမဟုတ် ကလိုရင်းပိုးသတ်ဆေးရည်တွေလူကိုယ်ပေါ် တိုက်ရိုက်ဖြန်းတာက ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းရောက်နှင့်ပြီးသား ကိုဗစ်-၁၉ ပိုးကို မသေစေနိုင်ဘူးလို့လည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိသူကိုယ်ပေါ် ဒီဆေးရည်တွေဖြန်းထားပေမယ့် သူနှာချေချောင်းဆိုးစကားပြောရာကနေ ထွက်လာတဲ့အမှုန်အမွှားတွေထဲမှာ ရောဂါပိုးတွေပါလာပြီး တခြားသူတွေကိုကူးစက်နိုင်စေပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် ဆေးတွေဖြန်းတာဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုမကာကွယ်နိုင်ဘဲ အန္တရာယ်သာဖြစ်စေတယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်က ဖော်ပြထားပါတယ်။
(၃) မန္တလေးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲခန်း ပြင်ဆင်းပြီးစီး
(၄) ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ငါးသန်းကျော်ပြီ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူဟာ ငါးသန်းကျော် (၅,၁၉၄,၀၂၈) သွားပြီဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူက သုံးသိန်းကျော် (၃၃၀,၀၀၀) ရှိသွားပြီလို့ ဝေါလ်ရိုမီတာ ဝက်ဘ်ဆိုက်က ဒီကနေ့ မေ ၂၂ ရက်မနက် ၈နာရီထိ ဖော်ပြချက်တွေအရ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ လူနာသစ် ထပ်မတွေ့တာ ၂၄ နာရီ ရှိပါပြီ။ မေ ၂၂ ရက်မနက် ၇နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ ကူးစက်သူပေါင်း ၁၉၉ ဦးရှိပြီး နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့အဖြေထွက်ထားသူ ၁၀၈ ဦးရှိထားပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ ကူးစက်မှုအများဆုံး အမေရိကန်မှာ လူတစ်သန်းခွဲကျော် ကူးစက်ခံထားရပြီး သေဆုံးသူက ကိုးသောင်းကျော်ရှိပါတယ်။
ကူးစက်မှုတွေမြင့်နေပေမယ့် အမေရိကန်က ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြန်ဖွင့်ပေးထားပြီး တချို့ပြည်နယ်တွေမှာ အပြင်ထွက်ရင် နှာခေါင်းစည်းတွေတပ်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်ပြီးရင် ဒုတိယ ကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့ ရုရှားဖြစ်ပြီး လူ သုံးသိန်းကျော် ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရသလို သေဆုံးသူ ၃,၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
ဥရောပဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားရာ ဗဟိုချက် ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ လက်တင်အမေရိက က ဗိုင်းရပ်စ် ဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘရားဇီးနိုင်ငံမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနှုန်း မြင့်နေပြီး အရင်က ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု တတိယအမြင့်ဆုံးနေရာမှာရှိခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်နေရာကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးမှာ လူသုံးသိန်း ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံထားရပြီး သေဆုံးသူ ၂၀,၀၀၀ ကျော်ရှိပါတယ်။
(၅) တရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေသစ်ကြောင့် ဟောင်ကောင်အဆုံးသတ်သွားနိုင်တယ်လို့ ဆို
တရုတ်အစိုးရက လုံခြုံရေးဥပဒေသစ်အတွက် အစီအစဉ်တွေကို ကြေညာပြီးတဲ့နောက် ဟောင်ကောင်အဆုံးသတ်မှာကို ကြောက်ရွံ့မိတယ်လို့ ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။
အမေရိကန်ကတော့ တရုတ်ရဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာ ဟောင်ကောင်မှာ အလွန်အမင်းမငြိမ်မသက်မှုတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ဟောင်ကောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ် ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတာဝန်တွေ အားနည်းသွားစေမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တရုတ်လွှတ်တော်မှာတော့ ဒီသောကြာနေ့မှာ ဆူပူထကြွအောင် လှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ ပုန်ကန်တော်လှန်မှုတွေကို တားဆီးထားတဲ့ အဲဒီဥပဒေကို ဆွေးနွေးသွားကြဖို့ရှိပါတယ်။
ဒီဥပဒေကိုထောက်ခံသူတွေဘက်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဖြိုခွဲဖို့ ဒီလိုဥပဒေလိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆန့်ကျင်သူတွေဘက်ကတော့ လူထုရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ဒီဥပဒေကို သုံးစွဲလာမှာ ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင် ဝူချီဝေအပါအဝင် ဟောင်ကောင်က ဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေက ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ကြေညာချက်ဟာ "တစ်နိုင်ငံစနစ်နှစ်ခု" အဆုံးသတ်ခြင်းလို့ ပြောပါတယ်။
ဟောင်ကောင်သမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံးနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လာတယ်လို့ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားသူတွေ ဆို
ပြည်သူ့ပါတီရဲ့ ဥပဒေပြုအမတ် မစ္စတာ Dennis Kwok က တကယ်လို့ ဒီတိုင်းသာ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တစ်နိုင်ငံ စနစ်နှစ်မျိုးအခြေအနေက တရားဝင်ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီး ဖြစ်သွားမယ်၊ ဒါဟာ ဟောင်ကောင်ရဲ့ အဆုံးသတ်ပဲ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါဟာ ဟောင်ကောင်သမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံးနေ့လည်း ဖြစ်တယ်လို့ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တိုင်ရာချန်းက ပြောပါတယ်။
ဟောင်ကောင်က ကျောင်းသားအရေးလှုပ်ရှားသူနဲ့ နိုင်ငံရေးသမား Joshua Wong က ဘီဂျင်းဟာ ဟောင်ကောင်ရဲ့အရေးပါတဲ့ အသံတွေကို အကြောက်တရားနဲ့ အင်အားသုံးပြီး တိတ်ဆိတ်ဖို့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့သူ့ရဲ့ တွစ်တာအကောင့်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ထင်ဟပ်ခြင်းမရှိတဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေကို ပြဌာန်းဖို့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတိုင်းဟာ အလွန်အမင်းမတည်မငြိမ်မှုတွေဖြစ်စေပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ရှုံ့ချမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတရုတ်အနေနဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေမပါဘဲ အခုအဆိုပြုချက်တွေအတိုင်း ဒီဥပဒေကို ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် အမေရိကန်အနေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဖို့ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို ဒီနေ့ အမိန့်ချမယ်၊ ကလိုရင်းပါတဲ့ဆေးတွေ လူ့ကိုယ်ပေါ် တိုက်ရိုက်ဖြန်းတာ လုံးဝမလုပ်ဖို့ ထုတ်ပြန်၊ မန္တလေးမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဓာတ်ခွဲခန်း ပြင်ဆင်းပြီးစီး